त्रिभुवन विमानस्थलमा आगलागी – Ujyalo Khabar
काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार आगलागी भएको छ । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलभित्र रहेको एयरपोर्ट टी एन्ड कफी सपमा आगलागी भएको एयरपोर्ट टर्मिनल कार्यालयले बताएको छ । एयरपोर्टको दमकलले आगलागी नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
मधेशका मात्र होइन, पूरै देशका छोरीहरू सक्षम हुनु जरुरी छ । तर, एसिडको बदला एसिडले छोरीहरूलाई सक्षम बनाउँदैन । यसर्थ मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्ति खेदजनक छ । आफूमाथि हिंसा गर्न खोज्नेको प्रतिकार गर्न छोरी सक्षम हुनु आजको आवश्यकता पक्कै हो । तर आफ्नो अनुहारमा एसिड छ्याप्नेको अनुहारमा एसिड नै छ्याप्दा कस्तो सन्देश जाला ? अनि समाज कता जाला ? हरेक घरमा छोरीहरूलाई एसिड प्रतिरोधको तालिम वा शिक्षा दिने कि हरेक घरका छोराहरूलाई‘यस्तो क्रूर अमानवीय हर्कत गर्नु अपराध हो,त्यसैले तिमीहरू अपराधी नबन, सुध्र’ भनेरशिक्षित गर्ने ? समाज होस् या परिवार, सुन्दर र सुखी बन्नका लागि एउटा पाटो मात्र असल र सक्षम भएर हुँदैन, दुवै पाटो समान हुनुपर्छ ।
Previous नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो महिनामै घटे पर्यटक..
Next काेराेनावाट बच्न काेराेना देवीको पूजाआजा ‘नेपालमा अाज ४२१ जनामा सं क्रमण पुष्टि ‘।
काेराेनावाट बच्न काेराेना देवीको पूजाआजा ‘नेपालमा अाज ४२१ जनामा सं क्रमण पुष्टि ‘।
मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता नब्बे लाख नाघे
बहिनि संग बिहे गर्नुहोस सुनको उपहार पाउनुहोस् ..
आगो रोख्नकोलागि सय मिटर लामो पिज्जा . .